Professor Fijnaut Professor oo ku takhasusay dambiyada ayaa raba inuu sharciyeeyo Cannabis-ka EU-da • Daroogada Inc.eu
Fijnaut oo ah borofisar ku takhasusay cilmiga dambiyada ayaa raba inuu sharci ka dhigo xashiishka EU
Cyrille Fijnaut (74) wuxuu ku doodayaa buugiisa cusub sharciyeynta xashiishka ee EU-da oo dhan. Qof kastaa wuu ogyahay in dagaalka daroogada uusan wax saameyn ah ku yeelan. Si loo joojiyo dambiyada abaabulan. Wuxuu ku dhawaaqay tan wareysi uu la yeeshay Knack.
Professorka hawlgabka ah ee dambiyada iyo sharciga dambiyada, iyo kuwo kale oo ka tirsan Jaamacadda Rotterdam, waa hay'ad ka shaqeysa arrimaha dambiyada, booliska iyo caddaaladda. Buugiisa cusub wuxuu ku qoray mid ka mid ah meelaha ay ka soo baxaan dambiyada abaabulan, magaalada dekedda leh ee Rotterdam. Fijnaut: “Maxaa la qabtay darteed siyaasadda daroogada dambiyada abaabulan ayaa xididdada ugu sii yeelan kara bulshada Nederland. ”
1 Siyaasad xumo dawada
2 Sharciyeynta ma xal baa?
Siyaasad xumo dawada
Dhamaadkii sagaashannadii, beeraha xashiishadda iyo shaybaarada daroogada ee Nederland ayaa sii kordhayay. Kadib waxaan ka digay in Nederland ay noqonayso sida Kolombiya oo kale. Sababtoo ah soo saarista daroogada ayaa culeys weyn saareysa bulshada, ”ayuu ku qeexay wareysiga uu siiyay Knack. Markaa waxaad u baahan tahay goobo, dad wax soo saari kara, ilaha wax soo saar iyo gaadiid. Tani waa laga dhayalsaday Nederland muddo aad u dheer. Taas oo dhibaatada ka dhigtay mid aad u weyn. ”
Waxay u muuqataa in dowladda Nederland ay wadatay indhooleyaal. Daawooyin badan ayaa laqabtaa sidii hore. Markaa kaliya garo xaqiiqda intee daroogo ah ay gaaraan meesha la doonayo. Crystal meth, kookaha iyo dawooyin badan oo naqshadeeye samays ah sida 3 MMC oo si fudud wadada ugu mara. Badanaa waa la keenaa si ka dhakhso badan pizza. Ma heli kartaa wax waalli ah.
Sharciyeynta ma xal baa?
Nederland waxaa ka jira sinnaan la'aan siyaasadeed oo ku saabsan sharciyeynta daroogada qaarkood iyo inay la tacaali karto dembiyada abaabulan. "Haddii aad sidaas sameyso, ka dib marka ugu fiican marka la eego xaaladda EU iyo xaalado dhowr ah." Dabcan marna gabi ahaanba ma cirib tiri kartid dembiga waana in booliisku soo dhexgalaa oo uu tallaabo adag qaadaa si uu u xakameeyo wareegga sharci darrada ah.
Runtii waa wax lala yaabo in Yurub gudaheeda xitaa aan laga hadlin sharciyeyn, halka xashiishadda laga sharciyeeyay baashaal ahaan iyo caafimaad ahaanba Canada iyo qaybo badan oo ka mid ah Mareykanka. Waqtiga qaar, mawduuca ayaa miiska saaran. Taasi waa sababta aan ugu doodayo in aan doorto wadahadalka Brussels. Nasiib darrose, siyaasaddii dawada ee ugu dambeysay ee Komishanka Yurub kuma jirto erey ku saabsan horumarkan. Waxaan u maleynayaa inay taasi gebi ahaanba khaldan tahay, maxaa yeelay waxaan ku jirnaa maalin ka hor dood adag oo ku saabsan sharciyeynta.
www.hlnbe.be (Xigasho, NE)
Xayawaanku waa macaamiisha cannabis ee cusub, caanuhu waxay isticmaalaan CBD si loo yareeyo xanuunka iyo walwalka
Qaar ka mid ah macaamiisha waaweyn ee warshadaha CBD maahan dad. Eeyaha iyo bisaduhu waxay qaataan ...